Dhaxalka lacagta hawlgabka - KPA Pension
Dhaxalka lacagta hawlgabka
Lacagta hawlgabka ee la dhaxlo – ammaan loogu talogalay qoyska
Lacagtaada hawlgab ee shaqo uma wanaagsana adiga oo keliya. Waxa kale oo aad haysataa ilaalino dhowr ah kuwaas oo caawin kara qoyskaaga haddii aad geeriyooto.
Qayo ka mid ah lacagta hawlgabka ee la dhaxlo goor kasta way ku jiraan halka kuwa kalena ay yihiin tabbaruc. Waa qaybahan kuwa keena lacagta hawlgabka ee la dhaxlo:
Lacagta hawlgabka ee la dhaxlo. Shaqo bixiyahaaga ayaa lacagtan hawlgabka siinaya qoyskaaga haddii aad geeriyooto.
Ilaalinta dib u bixinta. Raasamaalkaaga lacagta hawlgabka ee kaydsan waxa la siinayaa qoyskaaga haddii aad geeriyooto.
Caymiska nolosha ee shaqada. Haddii aad geeriyooto ka hor da’da 67 sanno waxa qoyskaaga la siinayaa tiro lacag ah oo mar keliya ah. Caymiska nolosha ee shaqada waxa ku jirta tiro lacag oo aasaas ah, tiro lacag oo carruurta ah iyo caawitaanka aaska.